Safal Khabar - केवल बेरियरले दुर्घटना हुनबाट दुई ट्रक जोगायो
केवल बेरियरले दुर्घटना हुनबाट दुई ट्रक जोगायो
आइतबार, २४ कार्तिक २०७६, १५ : ०५
चितवन । नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्डको पाँच किलो र मुग्लिन नजिकै चिनीयाँ सहयोगमा सडक सुरक्षाका लागि परीक्षणका रुपमा जडान गरिएको केवल बेरियरले दुई मालबाहक ट्रक जोगाएको छ ।
चिनीयाँ सरकारले निःशुल्करुपमा उपलव्ध गराएको ५०० मिटर केवल पर्यटन व्यवसायी मिङ्मा दोर्जे लामाले भन्सार, ढुवानी र जडान गरिदिनुभएको थियो । सो सडक आयोजनाका सूचना अधिकारी शिव खनालका अनुसार परीक्षणका रुपमा २०७५ साउनमा पाँच किलोमा ३०० मिटर र मुग्लिन नजिकै २०० मिटर केवल बेरियर लगाइएको छ । पाँच किलोमा गत माघमा ३५ टन भार भएको नेपाली ट्रक ठोक्किएर नदीमा खस्नबाट बचेको थियो ।
दुईदिन अघि सोही हाराहारी भार बोकेको भारतीय ट्रक मुग्लिन नजिकै केवलमा ठोक्किएर नदीमा खस्नबाट रोकिएको खनालले बताउनुभयो । भारवाहन ट्रकको तुलनामा यात्रुबाहक बसको भार कम हुने भएकाले केवल प्रभावकारी देखिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । नेपालका यस्ता सडकमा यो केवलले दुर्घटनाबाट जोगाउन सक्ने देखिएको खनालको भनाइ थियो ।
सुरक्षित देखिएपछि नेपालका अन्य यस्ता सडकमा पनि केवल प्रस्ताव गरिएको छ । नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्डमा बार कम्जोर हुँदा वर्षेनी धेरै सङ्ख्यामा सवारी साधन त्रिशूलीमा खस्ने गरेका छन् । सो सडकको विस्तारका क्रममा परीक्षणका रुपमा केवल जडान गरिएको हो । सो केवलबाट प्रभावित भएर पर्यटन व्यवसायी शेर्पाले करिव रु १५ लाख सहयोग गर्नुभएको थियो । एक मिटर अग्लो पोष्टमा पाँच लाइन केवल तन्काएर जडान गरिएको छ । साना सवारीसाधन ठोक्किएको अवस्थामा सो सवारीसाधन भने पछाडि धकेलिने छन् । (रासस)
काठमाडौँमा बसको ठक्करबाट विद्यार्थीको मृत्यु भएपछि बसमा आगजनी
काठमाडौँको सुकेधारामा बसको ठक्करबाट एक युवतीको मृत्यु भएको छ । ...
कोहलपुरमा एक बालिकालाई ट्रकले ठक्कर दिएपछि भएको...
मोटरसाइकलको ठक्करबाट घाइते वृद्धाको मृत्यु
मोटरसाइकलको ठक्करबाट शुक्रबार घाइते हुनुभएका एक वृद्धाको...
सुकुटे बस दुर्घटना : उन्नाईसको निधन
सिन्धुपाल्चोकको सुकुटेमा भएको बस दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको...
१. सलह पुनः नेपाल फर्किन सक्ने सम्भावना, सतर्क रहन आग्रह
२. मेरो प्रेम सम्बन्धका बारे आएको टिकाटिप्पणी र समाचारमा कुनै सत्यता छैन : पूर्णिका शाह
३. एक स्वास्थ्यकर्मीले सारे १२ जनालाई कोरोना, तीन वटा वडा सिल
४. असारे विकासको नमुना : निर्माण सम्पन्न भएको १० दिनमै भत्कियो नाला
५. आज दिनभरको मौसम कस्तो रहला ? भारी वर्षाको सम्भावना
६. विदेशमा रहेका कोरोना संक्रमित नेपालीहरु मध्ये ९२ प्रतिशत संक्रमणमुक्त
७. ठगी गर्नेमा म्यानपावर व्यवसायी अत्यधिक
८. अविरल वर्षाले गैडाकोटमा ५ सय घर डुबान
९. बाढीपहिरोबाट तीन दिनमा ५५ जनाको मृत्यु
७. प्रचण्ड–ओली बिच बालुवाटारमा निर्णायक छलफल हुँदै, सहमती नभए पार्टी विभाजन निश्चित